प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७६, सोमबार २०:२५
टे्किङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) को निर्वाचन मिति तय भएसंगै नेतृत्वका आकांक्षीहरुले आफ्नो उमेद्वारी सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमध्येका एक हुनुहुन्छ तेजबहादुर गुरुङ । पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संस्था टान यतिबेला विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त विरामी झैं छ । टानलाई यो अवस्थाबाट माथि उठाएर स्वस्थ्य गतिमा अगाडि बढाउँनु नयाँ नेतृत्वको चुनौती हुनेछ । पर्यटन मजदुरदेखि सफल व्यवसायीसम्म बनेर पर्यटन क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुल्नुभएका गुरुङ आफु त्यो चुनौतीका लागि तयार रहेको बताउँनुहुन्छ । टानको भावी अध्यक्षमा उहाँको उमेद्वारी लगायत विषयमा जुली गुरुङले गर्नुभएको कुराकानी संक्षेपमा……..
प्रश्नः टान लामो समयदेखि समस्याले ग्रस्त छ । यहीबेला तपाई अध्यक्षको आकांक्षी बन्नुभएको छ । तपाईको उमेद्वारी केका लागि ?
उत्तरः टानको समग्र अवस्था हामी सबैलाई थाहै छ । टानले जुन किसिमले गति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन । ब्यवसायीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । टीमको समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । पर्यटन मजदुरहरूका समस्या उस्तै छन् । मैले पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा बिताएको लामो समय भइसकेको छ । पर्यटन मजदुरदेखि व्यवसायीसम्म भएर नेपाली पर्यटन क्षेत्रको लामो अनुभव बटुलिसकेको छु । यसले गर्दा म पर्यटन मजदुरको समस्या राम्रोसँग बुझ्न सक्छु । ब्यवसायीदेखि नेपाली पर्यटन क्षेत्रको समग्र समस्यालाई पनि बुझ्न सक्छु । त्यसैले मैले टानलाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठाएर अगाडि बढाउँन सक्छु भन्ने विश्वासकासाथ उमेद्वारी घोषणा गरेको हुँ ।
प्रश्नः यसमा अन्य ब्यवसायीहरूको प्रतिकृया कस्तो पाउनु भएको छ ?
उत्तरः टानलाई मेरो नेतृत्वमा समृद्ध तरिकाले अघि बढाउन सक्छु भन्ने विश्वास ममा छ । ममाथि अन्य पर्यटन व्यवसायी र मजदुर साथीहरूको पनि यही विश्वास देखेको छु । धेरै साथीहरूले यसका लागि जोड गर्नुभएपछि मात्रै मैले पनि उम्मेद्वारी दिएको हुँ ।
प्रश्नः यसअघिको नेतृत्वलाई काम गर्ने वातावरण थिएन, बनेन वा चाहेन । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
उत्तरः अघिल्लो कार्यसमितिका साथीहरुलाई गाली गर्न चाहन्न । आजसम्म जति पनि कार्यसमितिमा रहनुभयो उहाँहरुले सक्नेजति प्रयासहरू गर्नुभएको छ । त्यसलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ । तर, त्यत्तिले मात्रै पुगेन । अव योभन्दा राम्रो तरिकाले टानलाई चलाउँन अझ बलियो नेतृत्व आउँनुपर्छ भन्ने हो । टान हाम्रो साझा संस्था हो । यसमा रहेका समस्याहरू पनि हाम्रा साझा समस्याहरू हुन् । त्यसैले यी समस्या समाधान गर्नका लागि हामी सबै मिल्नु पर्दछ । हामीसँग लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनु भएका अग्रज व्यवसायी हुनुहुन्छ । केही गरौं भनेर जोसकासाथ आउँनुभएका युवा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ । अग्रज व्यवसायीहरूको अनुभव र युवा व्यवसायीहरूको जोसलाई मिलाएर अघि बढ्नु पर्छ । यसले हाम्रो समस्या समाधान गर्नमा मद्दत पु¥याउँने छ । अब आउने नेतृत्वले टानमा आफ्ना सबै सदस्य र सरकारसँग समन्वय गरी आफ्ना एजेण्डाहरूलाई जोडतोडका साथ प्रस्तुत गर्ने र ती एजेण्डाहरू पूरा गराउँन पहल गर्ने काम गर्नुपर्दछ । अघिल्लो कार्यकालमा त्यही कमजोरी देखिएको हो । यदी अब त्यसो नगर्ने हो भने, टान झन् समस्यामा फस्दै जाने छ ।
प्रश्नः टानमा तपाईले भन्नु भए जस्तो ब्यापक सुधार ल्याउने तपाईका एजेण्डाहरू के के हुन् ।
उत्तरः पहिलो कुरा टानमा हामीले सामूहिक नेतृत्वको विकास गरी अघि बढ्न आवश्यक छ । टानलाई राजनीतिक रुपमा गुटउपगुटभन्दा पनि एकजुट बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा व्यवसायीक मुद्दाहरू समाधान गर्न मद्धत पुगोस् । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको टिम्सको कार्यान्वयन हो, जुन समाधान गर्न अत्यावश्यक छ ।
टिम्सको मुद्दामा जुन गतिरोध उत्पन्न भएको छ, यो अवस्था अब धेरै लम्बिनु हुँदैन । चाहे सरकार जुनसुकै दलको होस् । सबै व्यवसायीहरू मिलेर यो मुद्धालाई सशक्त ढंगले उठाउँन आवश्यक छ । टिम्सको समस्या चाँढो र स्थाई रुपमा समाधान गर्न आवश्यक छ । हिजो पनि टिम्सका मुद्दाहरु उठाउँदै गर्दा अस्थाई रुपमा, क्षणभरलाई मात्र हेरियो । अब यसरी हुँदैन । टिम्सको स्थाई समाधानका लागि दुई वर्षको कार्यकाल पर्खनु हुँदैन । नेतृत्व सम्हालेको पहिलो दिनबाटै हामीले टिम्सको कुरा उठाउनुपर्छ र यसको स्थाई समाधान खोज्नतर्फ लाग्नुपर्दछ ।
टिम्स सम्झौता अनुसारको रकमहरू कुनकुन खातामा जानुपर्ने हो, सिधैं जानुपर्छ । जम्मा हुनुपर्छ । त्यो रकम टिम्सको कार्यविधी अनुरुप खर्च होस् । त्यसो भएमा टिम्सले निरन्तरता पाउने संभावना छ ।
टिम्स कार्यान्वयन नहुनुमा बेरुजु रकमको कुरा उठाइएको छ । हिजो देखिएका ती बेरुजु रकमहरू पनि फस्यौंट गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर, त्यसका लािग व्यक्तिको मानसिकता परिवर्तन हुन जरुरी छ । राजनीतिमा आस्थाभन्दा माथि उठेर सोच्न सक्नुपर्दछ । जुँगाको लडाई छोड्नु पर्दछ । यो अवस्थाले मात्रै समस्याको समाधान निस्कने छ ।
अहिले पनि टिम्स बेच्ने ब्ययवसायीहरु नै हुन् । टिम्स बेचेर ब्यवसायीहरुले रकम जम्मा गरिदिएका छन् । तर, यत्रो रकम सरकारको ढुकुटीमा कुहिएर बसेको छ । सोही कारण हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा नयाँ गन्तब्यहरूको पहिचना गर्न, गन्तब्यहरुलाई ब्यवस्थित गर्न, प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेका छैनौं ।
विगतको पाँच छ वर्ष यो टिम्सको रकमको कारणले गर्दा सबैको ध्यान यतै केन्द्रित भएको छ । टिम्समात्र सबैकुरा हो भन्ने ब्यवसायीहरुमा भ्रम परेको छ । त्यसकारणले टिम्सको मुद्दालाई तत्काल समाधान गरिनु पर्दछ ।
प्रश्नः पहिलो एजेण्डा नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छन्, रु कसरी पुरा गर्नुहुन्छ ?
म चुनौतीमै काम गर्न मन पराउछु । मेरो दोस्रो एजेण्डा भनेको ब्यवसायीहरुले हाम्रो प्रोडक्टको प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । प्रचारप्रसारका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०, लगानी वर्ष लगायत राष्ट्रिय कार्यक्रमको कुरा गर्दैगर्दा हाम्रा प्रोडक्टहरुको राम्रो प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । यसको जिम्मा पर्यटन बोर्ड कै हो । बोर्डसंग प्रचारप्रसारका लागि रकम पनि छ । प्रचारप्रसारका लागि सरकारले बजेट पनि छुट्याइएको छ तर पनि हाम्रो प्रोडक्टको प्रचारप्रसार हुन सकिरहेको छैन । यो विषयमा निजी क्षेत्रसंग किन समन्वय हुन सकिरहेको छैन । यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउन आवश्यक छ । हाम्रो प्रोडक्टलाई विदेशसम्म प्रचारप्रसार गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचारप्रसार गर्न संचारमाध्यमहरुमा हाम्रो प्रोडक्टको प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ ।
नम्बर तीनमा जतिपनि नयाँ गन्तब्यहरु छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा विदेशीहरुलाई अफर गर्न नयाँ चिजहरू केके छन्, भन्ने बारेमा हामीले नयाँ प्रोडक्टहरूको खोजी गर्न, नयाँ गन्तब्यहरुको पहिचान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यो कार्यलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । नयाँ गन्तब्य पहिचान गर्न सकिन्छ । नयाँ पिक खुला गर्न सकिन्छ, नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रोडक्टहरु पर्यटकलाई अफर गर्नतिर हामी लाग्नुपर्छ ।
चौथो एजेण्डा भनेको देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा हामीले टानलाई पनि संघीय पुनसंरचनाअनुसार पुनसंरचना गर्नुपर्छ । हाल टानले केहि गर्न नसक्नुको पहिलो कारण श्रोत नभएर हो । तर, सरकारले छुट्याएको पर्यटनसंग सम्बन्धीत ७० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएर फर्किरहेको अवस्था छ । यस्तोमा पर्यटनसंग सम्बन्धीत कार्यहरु कस्ले गर्ने त टानले गर्ने हो नी । तर टानले अहिलेको संघीय संचरना अनुसार तीनै तहमा टानलाई पुनसंरचना गर्न आवश्यक छ । यसो भएका प्रत्येक तहमा संघबाट, प्रदेशबाट र स्थानीय तहसंग टानले सहकार्य गरेर पर्यटन क्षेत्रका लागि छुटिने बजेटहरु हामीले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्छौ । यो कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्यो भने टानसंग बजेट प्रसस्त मात्रामा छ ।
पाँचौ भनेको पूर्वाधारबीना पर्यटन संभव छैन । पर्यटन पूर्वाधार विकासका कुरा उठाउनुपर्दछ, बाटोघाटो, अस्पताल, पिउने पानी, दुर्गम क्षेत्रहरुमा पोर्टर सेल्टरका कुराहरु सरकारसंग, एनजीओ, आइएनजीओसंग समन्वय गरेर पनि पर्यटन पूर्वाधार विकासका कुराहरुलाई हामीले चासो राख्नुपर्दछ । टे्किङ टे्लहरु ध्वस्त भइरहेका छन् । सडक निर्माणमा बैकल्पिक विकल्प दिन वा टे्किङ टे्लहरु जोगाउन टानले पहल कदमी लिनुपर्छ सम्बन्धीत निकायसम्म छलफल अन्तरकृयाहरु गरेर सतर्क गराउनुपर्छ कि पर्यटन पदमार्य नमासियोस, सरकारलाइसंग तुरुन्त समन्वय गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ । मासिंदैं गएको टे्किङ टे्ल जोगाउन वा बैकल्पिक पदमार्ग निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ ।
छैटौं भनेको पर्यटन ब्यवसायीहरुले आफ्नो प्रोडक्टहरु विदेशमा प्रदर्शन गरिरहेका छौ । तर त्यो भनेजस्तो हुन सकेको छैन । टानले विदेशमा संस्थागत रुपमा नै सबै ब्यवसायीको हितमा काम गर्नुपर्दछ । सबैको प्रोडक्टलाई टानले सेल गर्नुपर्दछ । टानले पहिलो टेकिङ र एक्सिपिडिसनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रश्नः चुनौती धेरै छन् आखिरमा फेरी पनि आउने त गुटउपगुटकै हुन्छन् । यस्तोमा कसरी काम गर्न संभव होला ?
उत्तरः टानमा गएपछि अध्यक्षको मुख एकातिर महासचिवको अर्कातिर हुने, उपाध्यक्षको अर्कोतिर हुनुभएन । समग्र पर्यटन ब्यवसायीको हितमा काम गर्नुपर्छ । प्यानलबाट जानेहरुले दम्ब देखाउने, एकले अर्कोलाई असयोग गर्ने, अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । अब सबैको सामुहिक विचारलाई लिएर टान अघि बढ्नुपर्छ तबमात्र टानको समग्र समस्या र चुनौतिको सामना गर्न सकिन्छ ।
tourismnewsonline.com बाट साभार